Asaalumu calaykum, waxaan salaamayaa dhaman shacabka Ogaadeeniya meelkasta oo aad ku sugantihiin. Salaan kadib, waxaan rabaa in aan warbixin kooban kabixiyo wadankii iyo waxaan kala kulanay markaan wadanka soogalnay. Ugu horayn dadka shacabka ah ee Ogaadeeniya joogaa waa dad dhibaatooyin badani soogaadheen oo uu gumaysigu u gaystay dhawac iyo dhib badan oo dhinac walba usaameeyey. Hadaba iyada oo uu dhibkaasi soogaadhay hadana waxaa kamuuqata in ay aad ugu soo adkaysteen dhibkii loogaystay welina ay rajo weyn oo wadaniyadeed muujinayaan, mustaqbal fiicana ay rajaynayaan. Dadka intooda ugu rooni waxay joogaan oo ay kusoo urureen magaalada Jigjiga ama ganacsato ha ahaadeen ama aqoonyahay amaba bulshada qaybeheeda kale ha ahaadeene waxaad moodaa in goboladii kale laga soo guuray oo noloshu waxay isugu soo uruurtay magalada Jigjiga oo ah caasimada gobolka. Waxaan rabaa in aan qoraalkan kusoo koobo laba waaxood oo muhiim u ah nolosha bulshada oo intii aan gobolka joogay aan u kuurgalay waxayna kala yihiin caafimaadka iyo waxbarashada wixii kalena waan ku daba darayaa anoo soo koobaya Insha Allah.
Baahida ugu badan ee wadankeena ka jirtaa waa caafimaad la'aan sababtuna waxaa weeye dad badan oo hada jeelasha kasoo baxay oo caafimaad daro badani hayso ayaa jira taas oo ay keentay jidh-dilkii, garaacii iyo nolol xumadii ay jeelka kalasoo kulmeen. Waxaa kale oo iyaduna caafiimaad xumaanta qayb wayn kasii qaadatay abaartii wadanka kadhacday sanad kahor oo iyana raadkeedii weli muuqdo gaar ahaan dadka reer guuraaga oo xoolihii ka dhamaadeen baahi dhaqaale iyo gaajo badana ay soo food saartay. Intaas oo dhanba iyada oo ay jirto hadana dhakhaatiir iyo goobo caafimaad oo tayo leh majiraan. Dhismoyaal caafimaad way jiraan oo guryo iyo meelo caafimaad oo dhisani way jiraan laakiin qalabkii caafimaad iyo dhakhaatiir tayo leh oo bulshada u adeegaa majiraan. Maalin dhowayd waxaan booqasho kutagnay isbataalka weyn ee magaalada Jigjiga waxaan ufiirsaday qalabka yaala iyo qaabka ay shaqadu usocoto waxaana isoo baxday in ay baahi badani xaga caafimaadka ka jirto. Tusaale ahaan qalabka sida, X-Ray machines, MRI, CT scan iyo gargaarka degdega ah aad iyo aad buu uhooseeyaa inta badana maba jiraan laakiin goobo caafimaad way dhisan yihiin marka laga eega dhismayaasha. Waxaa kale oo jira goobo caafimaad oo private ah sida clinics oo kale oo dhisan laakiin aan tayo saas ah lahayn.
Xaga waxbarashada deegaankeena waxaa kuyaala goobo wax barasho oo badan xataa tuulooyinka iyo degmooyinka hoose iskuulo iyo goobo wax barasho oo badan ayaa ku yaala laakiin waxaa aad uliita tayada wax baraashada iyo dadka waxbaraya. Jigjga waxaa ka jira jaamacad iyo sadex college oo laba private yihiin Godeyna hal college ayaa kuyaala, Qabridaharana jaamacadu qayb bay kuleedahay laakiin xarumahaasi maaha xarumo waxbarasho tayo leh oo qoomiyadaha kale ee Itoobiya kula tartano soo saari kara amaba u diyaarsan ilaa heerkaas. Waxaase wax lagu farxo ah dhalinyarada deegaanka joogtaa badankoodu waxay haystaan shahaado heer jaamacadeed ah ama college laakiin waxay badan koodu ubaahan yihiin in waxbarashadooda lasii hormariyo oo loosameeyo Public library iyo goobo kale oo ay ku qaataan tababaro dheeraad ah si ay uhormariyaan heerkooda aqooneed iyo noloshoodaba. Waxaa aad loogu baahanyahay library iyo boogaag ay ardaydu iyo bulshada kale ee deegaankuba akhristaan.
Ugu dambayntii waxaan dhalinyarada waxbaratay ee deegaanka udhalatay ee qurbaha joogta ka codsanayaa in ay wadanka kusoo laabtaan oo ay dadkooda ufaaiideeyaan gaar ahaan dadka caafimaadka bartay ee bulshada xaga caafimaadka ka caawinkara sida ,dhakhaatiirta, nurses, social workers, iyo public health administrators dadkaas baahi badan ayaa looqabaa.
Gaar ahaan ururka OYSU waxaan ka codsanayaa in ay xubnuhu isasoo diwaan galiyaan oo qof walba iyo takhasuskiisa ay soo sheegaan iyo waxa ay bulshada uqabankaraan. Qofkii sadex bilood oo fasax ah sooqaadan kara ee kaqayb qaadan kara dhismaha bulshada dhinacay doontaba ha ahaatee waan soo dhowaynaynaa.
Xaga abaabulka iyo isusoo dhowaynta bulshada Soomaaaliyeed ee deegaanka degan wax badan baan kaqabanay. Qayb kasta oo ay bulshadu ka koobadantahay waan lakulanay kulamadaasina isfahan wanaagsan ayey noogu soo dhamaadeen aad iyo aadna waa naloosoo dhoweeyey. Waxaan dhisnay laamo ama faracyo badan oo OYSU ah oo dhamaantood hada shaqaynaya oo ka qayb qaadanaya isku soo dhowaynta iyo midaynta umada Soomaaliyeed ee Ogaadeeniya kunool welina waan siiwadnaa dhismahaas iyo wacyigalinta bulshada howshaasuna meel fiican bay noomaraysaa Ilaahay mahadiis.
Xaga dowlada wadanka waxaa hada kadhalatay dowlad aad u dabacsan dadkuna ay soo dhoweeyeen oo uu hogaamiynayo madaxweyne Mustafe Cumar. Dowladaasi weli mayna sibuuxda ucaga dhiganin oo waxay hada wadaa dhismihii guud laakiin shaqo wanaagsan ayey wadaan shacabkiina wuu kunastay. Waxaa muuqda dhibaatooyin ay dowladii hore ee meesha ka baxday ay gaysteen waxyaabaha hada muuqdana waxaa kamid ah dhalinyaro Heego layidhaahdo oo uu Cabdi Iley dhisay laguna haysto dhibaato ayaad gaysateen maalinkii uu Jigjiga dhibku ka dhacay. Dhalinyaradaas oo dadkii madaxda u ahaa ee samaystay ay hada wadanka badankood ka bexeen ayaad mooda in sigaar ah hada loogu dabajiro taasna hada way iska soo dhamaanaysaa.
Hadii Ilaahay yidhaahdo waxaan isku dayi doonaa in aan warbixin todobaadle ah aan idinla soo wadaago wixii hada kadambeeya hase ahaatee hada intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa.